I-Brain-Computer Interfaces kakade esikhathini esifushane: Ingabe i-Facebook izokwazi ukufunda imicabango yethu? Impendulo: yebo: uMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-6 March 2019	• 20 Amazwana
Abaningi bacabanga nge-brain-computer interface (BCI) yamafilimu e-SciFi afana neThe Matrix futhi abakholelwa ukuthi ubuchwepheshe buzofika kuze kube manje. Abakwa-Criticasters nabo bakholelwa ukuthi ukuhlakanipha okufakelwayo (AI) kuzoke kwenzeke okuningi, ngoba uhlelo lwezinhlelo zokusebenza luyenziwa ngabantu. Ukugxekwa okunjalo, ngombono wami, kuyinto encane kakhulu futhi inqabile ukuthuthuka okusebenzayo lapho lezo zilungiswa zingakwazi ukufeza okuningi ngokuqoqa imininingwane eminingi futhi ngaleyo ndlela zifunde ngokushesha. Yiqiniso, izinkinga zomuntu ezinjenge-intuition noma imizwa zisendleleni ende kusuka embhedeni wami, kodwa umbuzo wukuthi kukhona yini isidingo salokhu ezweni le-AI. Okucacile ukuthi abantu abaxwayisa kakhulu kakhulu nge-AI ngokwabo bafaka imali ngokugcwele ku-AI. Impikiswano lapha, njengokwimeko ka-Elon Musk, ukuthi uma singenakukwazi ukushaya i-AI, singcono kakhulu ukuhlangana nayo. Asikwazi ukulindela ukuthi ukuziphendukela kwemvelo kwenza i-skull yethu ibe mkhulu, ngakho-ke i-neocortex eningi izongena ngakho ngakho-ke uma sifuna ukuqonda, kufanele silinde ubuchopho bethu efwini; kusho i-Google CEO ray Kurzweil. Umbuzo wukuthi: lokhu kuzokwenzeka yini futhi kuyokwenzeka maduzane?
Umbuzo wokuthi empeleni kungukuthi ukuhlanganiswa ne-AI kuphela ikhambi eliwusizo lokusho. Uma ungavumeli ubuchwepheshe obungakwazi ukufeza lokhu kuphelelwa yisilawuli nokuwukhawulela ekusetshenzisweni kwezokwelapha noma zesayensi, cishe ngeke kwenzeke ngokushesha, kodwa ngoba nje siphila ezweni lapho abantu abaphezulu bebanempi kakhulu futhi badlale umdlalo we-Hegelian wemikhakha yezikhali, kulindeleke ukuthi zonke izinhlobo zobuchwepheshe ezihlangene ne-AI zizofika emakethe ezizodinga izimpilo zabantu. AmaRobhothi kanye nama-drones azobukela abantu noma ama-robot empini. Lezi yizo zonke izenzakalo ezenzekayo okwamanje. Uma singakwazi kakade ukubona ukuthi ohulumeni bahlola abantu, ngabe siyoba nesimo sini lapho abantu bebambelela kwi-intanethi ngobuchopho? Kungashiwo ukuthi konke lokhu kuzolawulwa ngokufanele, kodwa ungaphinda umise ukuthuthukiswa kwe-AI. Ngenhlanhla, kukhona i-paradigm esempumalanga-ntshonalanga engasetshenziswa ngaso sonke isikhathi njenge-alibi: uma iRussia neChina zihlakulela ama-robot ezizimele kanye ne-AI, kumele sikwenze lokho futhi. Igeyimu ye-Hegelian yezinto eziphikisanayo ezibonakalayo isetshenziselwa isikhathi eside ukuze sikwazi ukusho ukuthi asikwazi ukuyeka ukuthuthukiswa. Futhi-ke kukhona okukhethwa kukho okukodwa kuphela, futhi yileyo ndlela ye-AI engaphezulu futhi ihlangene ne-AI; okungukuthi, ngamafuphi, ukuphikisana.
Yiqiniso kukhona okuningi okushoyo mayelana nentuthuko yesayensi yamanje. Isibonelo, sizuze kakhulu ku-nanotechnology, okwenze ukuthi kube lula ukuvuselela ama-athomu nama-molecule nokuthuthukisa izinto ezintsha. Isibonelo, singakwazi ukukopisha i-DNA noma ukwenza i-DNA yokwenziwa. Ngenxa yokuthi sikwazi ukumebala i-genome yomuntu, sekuvele kungenzeka ukwenza umsebenzi wokusesha we-Google emzimbeni womuntu nge-CRISPR CAS 12. Konke lokhu kuhlobene kakhulu nolwazi emkhakheni we-nanotechnology. Ngakho-ke asikho kude nokubhala kabusha iziphambeko zofuzo ezibangelwa izifo ezifana nomdlavuza ne-HIV ngakho-ke ungasho ukuthi ukungafi kuyasondela. Konke lokhu kuhlobene ne-AI kanye nokuqoqwa kwedatha, lapho ukukhishwa kwe-algorithms kungakhishwa khona. Ngenxa yokuthi singabheka izinga le-nano futhi singenele emzimbeni womuntu, sibona nentuthuko enkulu ekubalazweni ukusebenza kwemisebenzi yethu yobuchopho. Izitho zokufakelwa ziqhubeka zicwengile futhi ukuxhumana phakathi kwalawo maqhawe nobuchopho nakho kubuye kube ngokoqobo. Okwamanje, ngisho nase-biotech kukhona inkulumo yokuthuthukiswa izicubu eziphilayo ngakho-ke ungalindela ukuthi i-prostheses yekusasa iyoba yindawo engcono kakhulu yezinto eziphilayo. (Funda kabanzi ngaphansi kwevidiyo)
Ngakho-ke singakwazi ukusho ukuthi izifo nokuguga kungamiswa esikhathini esizayo esiseduze. Lokhu kusindisa ubunzima obuningi, nakuba empeleni abacebile bazozuza okokuqala. I-CEO ye-Google uRay Kurzweil uzibiza ngokwakhe i-optimist. Ngoba uma ubaluleke kakhulu futhi ubonisa izingozi ze-AI, unesifo esibi. Kodwa-ke, angizibheki njengeqembu elibi, kodwa bheka iqiniso elilula lokuthi zonke lezi zinsuthuko zezobuchwepheshe ziqhutshwa yizinkampani ezifanayo ezinkulu ezithatha inani elikhulu lemininingwane enkulu futhi zingasiphenya imini nobusuku. Ngizibuza mina umbuzo olula: ngingaba nethemba elingakanani kulezi zinhlangano uma zinekhono lobuchwepheshe olwandisa imingcele yokuphulwa kwangasese ebuchosheni bethu? Kuthiwani uma i-Wikipedia nezindaba sezivele zimibala? Ngifanele ngikuthole kangcono kangangokuthi ngifinyelele ngqo kulowo datha (ngoba maduzane ngizokwazi ukuthola isikhombimsebenzisi sezobuchopho ngalezo zintuthuko emkhakheni we-A ne-nanotech)? Konke okwenzeka empeleni kubheka ukuzethemba ohulumeni nezinkampani ezinkulu uma kamuva sibanika ukufinyelela ebuchosheni bethu. Futhi ukwethembeka, kumele ngivume ukuthi angiyena othembekile, kodwa ngingu-realist: Angibethembi ngamasentimitha. Abaningi bayothola ukuthi konke lokhu akufanele, njengoba zonke izizwe manje ziyazi ukuthi i-Google ne-Facebook mhlawumbe badonsa i-smartphone yabo. Abantu bakhetha ukuzithokozisa nokuthokozisa futhi bathatha ingozi yothando ngaphansi kokuthi "Anginakho ukufihla".
Kukude kangakanani ngempela nokuthuthukiswa kwalezo zinkimbinkimbi zobungqingili? Kude kakhulu. Akuyona into yokuthi u-Elon Musk waqala inkampani yeNeuralink e-2016. NgoJanuwari 29, Columbia University yashicilela umbiko wewebhusayithi nature.com uchaza indlela ukusebenza kobuchopho ku-cortex yomsindo kungashintshwa ngayo i-A ukuzwa nokukhuluma:
Ngokuqapha umsebenzi wobuchopho bomuntu, ubuchwepheshe buyakwazi ukuvuselela amagama umuntu azwayo ngokucacile okungakaze kube khona. Lokhu kuphumelela, okuyinto ehlanganisa amandla okukhulumisana okukhulumisana nokuhlakanipha kwengcebo, kungaholela ezindleleni ezintsha zamakhompyutha ukuxhumana ngokuqondile nobuchopho.
"Kulesi simo, uma ogqokile ecabanga ukuthi" Ngidinga ingilazi yamanzi, "uhlelo lwethu lungathatha izinkomba zobuchopho ezivela kulowo mcabango, futhi ziguquke zibe yizinkulumo ezihlanganisiwe, ezikhuluma ngomlomo. Lokhu kungaba ngumshintsho wegeyimu. Kungabanika noma ubani olahlekelwe amandla akhe okukhuluma, kungakhathaliseki ukuthi ukulimala noma isifo, ithuba elivuselelwe lokuxhuma ezweni elibazungezile. "
Eqinisweni, lokhu kusho ukuthi ubuchwepheshe bukhona kakade ukuze ufunde imibono. Lezi akuzona izinkolelo zendlovu. Lezi ziyiqiniso eziqinile zesayensi. Yilokho okunye ukuthuthukiswa okumnandi okungasetshenziselwa ukwenza abantu abayizithulu bazwe futhi noma benze abantu bafunde nge-intanethi. Kuzophinde kube usizo kakhulu emhlabeni we-intanethi yezinto. Cishe ungakwenza lokho I-Microsoft Hololens 2 ngisho lula ukusebenza futhi uma ucabanga "i-brr, kubanda lapha", ikhaya lakho elihle liyakwazi ukushisa kancane kancane, kepha ngingumuntu wangempela futhi ngibona izingozi ngesikhathi esisodwa.
Isimo sezindaba endaweni ye-interfaces yobuchopho njengamanje sinobukhulu emkhakheni obonakalayo, ngoba ukuhlinzwa kufanele kusabandakanyeke. Esikhathini esijwayelekile sibona isimemezelo se-chip yobuchopho esingakwandisa i-IQ yakho ku-200 ngokukuxhuma kwi-intanethi (njenge-intanethi lapha kwi-CBS News), kodwa kuphela emva kwenqubo yokuhlinzwa. U-Elon Musk umemezele ngoNovemba 2018 ukuthi isixazululo sakhe seNeuralink sidinga usizo lwezokwelapha. Bheka futhi ufunde kabanzi ngaphansi kwevidiyo.
Cishe u-Elon Musk usebenzisa ubuchwepheshe obubizwa ngokuthi I-Neural Dust lakhiwa nguMnyango Wezobunjiniyela Bomzimba kanye Nezobuchwepheshe be-Computer kanye neHelen Wills Neuroscience Institute, eNyuvesi yaseCalifornia, eBerkeley. Sicela ufunde isifinyeto saleli buchwepheshe lapha:
Kamuva iphepha lokufunda uye wachaza umqondo wesistimu okuthiwa 'uthuli lwama-neural' - uhlelo oluphansi lwesistimu elisezingeni elincane lokusekela ubuchopho - interfaces computer (BCI) nokuqapha ubuchopho ngaphakathi. Eshicilelwe ebuchosheni, izinhlayiya ezihlakaniphile zingasungula uhlobo olusha lwe-BCI, kusho abacwaningi bakaBerkeley Engineering.
Isimo esibucayi ekuxhumaneni kobuchopho-computer kungukuntuleka kwesistimu yoxhumano lwama-neural engagxiliwe ehlala isebenza isikhathi eside. Leli phepha lihlolisisa uhlelo oluyisisekelo lokuklama ukuhweba kanye nobukhulu obukhulu, amandla, kanye nemikhawulo yokukhawulwa komkhawulokudonsa noma izinhlelo zokuqopha kwe-neural.
Inethiwekhi yezinzwa ezincane ezifakiwe zingasebenza njenge-MRI ngaphakathi ebuchosheni, ukurekhoda idatha kwi-neurons eseduze nokuyithumela ngaphandle. Izinhlayiya ezinothuli ezincane zizoqukatha inzwa encane kakhulu ye-CMOS ekwazi ukukala umsebenzi kagesi kuma-neuron aseduze. Abacwaningi bacabangela a i-piezoelectric impahla exhasa i-CMOS enamandla yokwenza amasignali kagesi avela kumagagasi e-ultrasound. Le nqubo izophinde isebenze ngokuguquguquka, ivumela uthuli ukuba lubuyisele idatha emuva ngamagagasi omsindo ophezulu. Umhlabathi we-neural wawuzophinde uboshwe nge-polymer.
Mhlawumbe inselelo enkulu kakhulu ukufaka izinhlayiya ze-neural dust in cortex. U-Dongjun Seo nabalingani bakhe bathi lokhu kungenzeka ukuthi kungenzeka ngokuklama izinhlayiya zothuli ngamasu we-wire range, hero endaweni endaweni yokucindezeleka kwendawo. Lo mkhakha wawuzofakwa ngaphakathi kwe-cortex lapho izinhlayiya zothuli zifakwa khona.
Umbuzo manje ukuthi uzothatha isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba ama-nanobots angene ngaphakathi ebuchosheni bethu ukuletha ubuchopho kuyi-intanethi ngaphandle kokuhlinzwa (nge-umgomo, isibonelo). Inkinga kulokhu isala okuthiwa I-Blood Brain Barrier (i-BBB), okuhlukanisa ubuchopho kusuka egazini. Lolu hlelo oluhlakaniphile emzimbeni womuntu ngokuyinhloko luvimbela ubuchopho bethu ukuba bungacabangi nethonya lamagciwane nama-bacterium. Ngokuthuthukiswa kokukhohlisa okungokoqobo ngephrinta ye-3D ikhophi ye-BBB, isayensi manje ingabona ukuthi ingakwazi kanjani ukubhekana nale nkinga. Ngakho-ke cishe kuyoba yinkinga yesikhathi kuze kube yi-nanobots drill ngokusebenzisa le BBB bese uyivala futhi. Khona-ke ukuhlinzeka nge-interface kaMusk yobuchopho akusekho isidingo.
I-Facebook nayo ihileleke ekuthuthukiseni ukuxhumana kwe-computer-brain, "robotics" elithambile futhi, isibonelo, iphrojekthi enengqondo ngesongo kwenza kwenzeke. Ngaphakathi lokhu okuthunyelwe kwe-Fabebook kusukela eminyakeni eyi-2 edlule uMark Zückerberg wathi okulandelayo:
Emaminithini ambalwa adlule ku-F8, sabelane ngephrojekthi esisebenzayo kulolo suku ngelinye ilanga lisivumela ukuba sikhethe ukwabelana ngomcabango, njengathi esenza ngezithombe namavidiyo.
Ubuchopho bethu bukhiqiza idatha eyanele ukuhambisa ama-movie we-4 HD njalo ngemva kwesibili. Inkinga yukuthi indlela engcono kakhulu yokuthola ulwazi ngaphandle kwezwe - inkulumo - ingadlulisela kuphela ngemali efanayo yedatha njenge-modem ye-1980. Sisebenza ohlelweni oluzokwenza ukuthi uthayiphe ngokuqondile kusuka ebuchosheni bakho mayelana ne-5x ngokushesha kunokuba ungatheyipha efonini yakho namhlanje. Ekugcineni, sifuna ukuyishintsha ibe ubuchwepheshe obugqokekayo obungenziwa ekwenzeni. Ngisho no-yebo elula / cha "ukuchofoza kobuchopho" kungasiza ukwenza izinto ezifana neqiniso elingathandabuzeki lizwe ngokwemvelo.
Ubuchwepheshe buzobe buhamba phambili kakhulu ngaphambi kokuba sihlanganyele umcabango omuhle noma umuzwa, kepha lesi yisinyathelo sokuqala.
Ngakho-ke kusobala ukuthi ubuchwepheshe bukhona kakade. Iposi leZückerberg lineminyaka emibili ubudala futhi manje kukhona ukuthuthukiswa kokuguqula imicabango yangempela yenkinga yangempela ekukhulumeni nasekukhulumeni (njengoba kuchaziwe ngenhla). Ngakho-ke kuyindaba yokumaketha ukuze kuqinisekiswe umphakathi jikelele ukuthi ungene ngokuzithandela ukufaka isikhombimsebenzisi sekhomputha-computer. Lokho kuyokwenzelwa ikakhulukazi ekufezeni imiphumela engcono yokutadisha nokukhulisa i-IQ yakho. Mhlawumbe imibuso yomhlaba iyoba ngowokuqala ukuwela.
Impendulo yombuzo othi "Ingabe i-Facebook izokwazi ukufunda imicabango yethu?" Ingabe impendulo "yebo". Umbuzo omkhulu kuwe: Ingabe ufuna umhlaba uthuthuke ngendlela yokuthi sizoshintsha ngokwengeziwe kuma-cyborgs (funda lesi sihloko) futhi uthembela izinkampani ezinkulu kanye nohulumeni uma bekwazi ukufunda ingqondo yakho?
Ividiyo ngezansi ivela ku-2017. Phakathi naleso sikhathi, i-Google's Alpha Go ikwazi ukufunda ukudlala umdlalo bese ishaya abadlali abahamba phambili emhlabeni wonke, ngaphandle kolwazi olungaphambilini. Usongo lwe-AI luya ngokuya lwangempela, kodwa umbuzo wukuthi ukuhlangana ne-A yisisombululo noma ngabe i-AI kufanele ngempela iqukethe. Akufanele yini nje sinikeze i-AI (kanye nezinkampani ezinkulu zobuchwepheshe ezicindezela lokhu) isikhala ukuze sikhule futhi singahambisani nomkhuba wesinye isisetshenziswa sokuhlola futhi (ngisho nangaphezulu)? Kuze kube nini sizivumela ukuba sithathwe? Ingabe uzobe usebenzisa i-interface yobuchopho-computer esikhathini esizayo?
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: aabme.asme.org, nature.com, neurogadget.net, scitecheuropa.eu, businessinsider.com, futurism.com
Kungani umthetho wokuhudula uzokuthakazelisa ngokukhethekile uma i-neural lace izoletha ubuchopho bakho ku-intanethi
Amathegi: 12, umgoqo, BB, BCI, igazi, Ubuchopho, ubuchopho, CAS, ikhompyutha, CRISPR, Uthuli, F8, Facebook, afakiwe, Isikhombikubona, neural, I-Neuralink, inkulumo
6 March 2019 ku-14: 37
Le tech (i-Smart Dust / ukungathandwa kwabathelisi esikubona) ivela emalabhu e-DARPA no-Musk akuyona nje umuntu odayisayo oshayela imali emhlabeni wonke. Kungcono ukugcina amehlo ezinombeni ezifana noRegina Dugan ngemuva kwezithombe ukubona ukuthi kwenzekani ngempela ...
Ku-2013, u-Regina wamiswa njengeBhodi likaVarian Medical Systems, Inc. (I-NYSE: VAR), i-  futhi ngo-July 2014 wamiswa njengeBhodi likaZynga (i-NASDAQ: i-ZNGA)
Izinguquko ezenziwe ngokuxhumana namakhompiyutha zenza umphakathi ongenamakhemikhali amalungu awo aqhubeka nokuxhumana okuvame ukubukwa komsindo - ukuxhumana ngaso sonke isikhathi, ngokushesha ukwabelana ngokuhlangenwe nakho okukhulu kakhulu kwezenhlalakahle, futhi kubangele ukubandakanyeka komuntu siqu ngisho nezinkinga ezikude kakhulu. Lesi sizukulwane esisha asichazi izwe kuphela ngesisekelo sokufunda, noma ngabe kuhlaziywa ngokuhlelekile noma kwezincazelo eziningi;
futhi uzizwa ngokuphumelelayo ngokusebenzisa ukuxhumana kwe-audiovisual.
Iqiniso elisha, noma kunjalo, ngeke libe "lomzana wendawo yonke." Ukufanekisa okuphawulekayo kukaMcluuhan
ukuzinza komuntu siqu, ukusondelana komuntu siqu, ukulingana ngokulinganayo, namasiko ayebalulekile
izithako zendawo yakudala. Isifaniso esifanele kakhulu yilokho "idolobha lomhlaba wonke" -webhula, ekhukhumezekile, ehlukumezekayo, futhi ehlukanisiwe. Kodwa ukuthi ukuxhasana kubonakala kungcono kakhulu ukuxhumana kunokusondelana. Ukuxhumana okusheshayo sekuvele kudala into ehambisana nesistimu yomhlaba wonke. Ukukhubazeka ngezikhathi ezithile zalesi simiso sezinzwa - ngenxa yokwehluleka noma ukuphazamiseka - kuzokwenza kube nzima kakhulu, ngokuqinisekile ngoba ukuzethemba kokubili kanye nokuqinisa ngokuqinile ukusimama okuhambisana nobuhlobo obuseduze komuzi ngeke kube khona ohlelweni lolokusebenzisana "kwemizwa".
Phakathi kweminyaka emibili - Umsebenzi waseMelika ku-Era yezobuchwepheshe pag. I-13
12 March 2019 ku-19: 43
6 March 2019 ku-16: 22
Okokuqala buza mayelana nezimali
Landela umzila wemali ...
Le vidiyo yembula injongo yangempela yeqhinga le-Facebook: Imayini ye-Data ye-CIA
Ukuxhuma phakathi kwe-Facebook ne-DARPA (I-Advanced Advanced Research Projects Agency) kunezintambo eziyingozi: i-Information Awareness Office (ILO); I-TIA (Ukuqwashisa Okuphelele Kwolwazi, ukubizwa kabusha ngohlelo lokwaziswa kobuphekula); kanye NEZINHLOSO (Ukwaziswa kobuphekula nolwazi lokuvimbela).
Kodwa okubi njengokuqala kwe-Facebook, ukufana phakathi kwe-CIA yokusekela noma iphupho le-Google lokuba "ingqondo kaNkulunkulu," nokuxhasa nge-CIA noma i-Facebook umgomo wokukwazi konke mayelana nabo bonke akuyona into ebhekene nayo.
6 March 2019 ku-17: 08
Njengoba ngikuqonda kahle, uzobe uhlolwe ngabasolwa abajwayelekile 24 / 7. Bashaya ubuchopho bakho. Umbuzo ke yiyiphi imicabango yakho kanye nesistimu? Ingabe imicabango yakho igxilile ngokuphelele noma ingxenye, isusiwe, ngokuphazanyiswa noma into efanayo? Uyazi kanjani ukuthi ukhona? Kuthiwani ngomphefumulo wethu? Abadabuli bomphefumulo bayeza.
Ingabe thina ngokushesha sijeziswa ngokuba nemicabango "engalungile"? Ngakho ngaphambi kokwenza noma yini. Amaphoyisa ocabanga ukuthi uyala ebuchosheni bakho? Siyakwamukela ku-Orwell sika-1984 2.0 ebuyekeziwe.
Again for me Regime Shintsha ngokushesha !!
6 March 2019 ku-22: 01
Yebo, uhamba ngaleyo ndlela.
Ngivame ukukuzwa uthi "ukuguqulwa kobuso," kodwa ushintsho olulodwa kuphela lohulumeni olusebenzayo yilapho umphefumulo ngamunye ngamunye unquma ukungagunyazi igunya elivela phezulu futhi ungasadlali umdlalo ngokwemithetho yeskripthi. Kuphela lapho izinto zizoshintsha. Amandla alolo khetho lomphefumulo ngamunye we-1 angase abe nethonya elikhulu ekufaniseni okuphelele.
7 March 2019 ku-12: 51
Martin, othandekayo, ngikholelwa ukuthi unombono onengqondo futhi usalindele abantu abavamile engizibheka njengezigqila eziphelele.
Abasolwa abajwayelekile ngeke bazinikele ngokuzithandela izikhundla zabo eziyinhloko. Lokhu kudinga uhlobo olufana ne-Fortuijn lokushintsha isimo se-status esivele sikhona. Umbono wami othobekile.
7 March 2019 ku-13: 32
Usho ukuthi ukhona esiteshini ukuze uphonse abantu emuva emaphoyiseni bese uqhubezela ku-pawn right-wing noma i-FvD.
Bese ufunda isihloko sami sokugcina.
7 March 2019 ku-14: 37
Kumele ngithembe ukuthi angikwazi ukuthumela amazwana akho. Uyazi ukuthi ngiphakamisa ukuguqulwa kwesimiso sombuso. Eyodwa.
7 March 2019 ku-14: 48
Angicabangi ukuthi kufanele silindele kubaholi, kodwa kumele sonke sibe ngababusi abazimele ngabanye ngokubamba iqhaza emkhawulweni womphefumulo. Asidingi iPim Fortuyn entsha noma osombusazwe. Leyo nqubo yeminyaka eyizinkulungwane ezisekelwe ekudaleni i-demos cration iyingxenye yenkohliso.
6 March 2019 ku-17: 14
6 March 2019 ku-17: 20
Ukuhlaselwa kwe-Bio (kufaka phakathi i-CRISPR) kukhuthazwe eBarcelona ngenkathi i-MWC19, ixhaswe yibhange elithi Sabadell (BStartup) ne-GSMA
Abantu abalandelayo babekhona emcimbini ofanelekile aboniswe nge-4YFN (Iminyaka kusuka manje), okusho ukuthi ukusika kuba phakathi kwe-2023-2030
U-Edgar Pons Forn
U-Alex Rodriguez Vitello
6 March 2019 ku-18: 00
Enye inhlangano okufanele uyiqaphele u-Andreessen Horowitz nayo.
Ukukhula, ukuthengisa, ne-Era entsha noma i-B2B. UMartin Casado, u-Andreessen Horowitz - UBANCO SABADELL
9 March 2019 ku-23: 47
@Zalm, uqinisile kahle ... ngiyabonga ngokuthunyelwe kwakho!
6 March 2019 ku-19: 30
Ukushintsha ama-agent / abathonya abafana noRogan no-Musk
7 March 2019 ku-22: 29
I-NOS ilandela izihloko zakho 😉
Kuthiwani uma unkulunkulu walesi planethi enza ngamabomu amaphutha ku-DNA yethu, ukuze sifune ukuba i-DNA yethu iguqule ngokuzithandela. Iqembu elibusayo kule planethi elikopisha lokhu empeleni lenza okufanayo, lidala ama-virus we-HIV nokunye okunjalo ukuze sijoyine ngokuzithandela inethiwekhi yabo ngokuzithandela.
Kodwa ngicabanga ukuthi ngaphandle kwalesi sibalo uNkulunkulu usinikile amandla amakhulu ukuthola indlela yokuphuma. Lo Nkulunkulu akatholakali kule planethi, kuphela okwethulwa ngokuxhumana kwethu kwangempela. Yingakho bafuna ukunciphisa usuku lwethu, ukuze bakwazi ukweba amandla ethu (okudala).
8 March 2019 ku-00: 39
UNkulunkulu wakho ngaphandle kwalesi sibalo somphefumulo wakho!
8 March 2019 ku-01: 29
Yebo, kodwa lapho ngisho lokho, bangibopha esiphambanweni.
8 March 2019 ku-02: 22
Ngisho ukuthi ngikholelwa emandleni aphezulu kunathi, lokhu kusekusebenzeni wonke.
Ngaphandle kwalokho ngifana noLusifa futhi ngicabanga ukuthi nginguNkulunkulu oyedwa weqiniso / umphefumulo.
Usuvele ukhulule izinto ezimbalwa ngakho, kodwa ngifisa ukwazi lapho iqala khona. Ucabangani ngalokhu? Angikhulumi ngokuqala okusha lapha emhlabeni kepha ekuqaleni.
10 March 2019 ku-21: 35
Usanda kubukwa ividiyo mayelana nabadlali be-basketball e-US. Abantu bathi bayaphonsa ngokunembile, baphinde bazuze ngokushesha kunokujwayelekile (futhi bacabangela ubudala) ....
Mhlawumbe (ingxenye) i-robot abantu sebevele bedlala emidlalweni ehlukahlukene.
12 March 2019 ku-11: 52
« I-Microsoft Hololens 2 ukunambitha okungenzeka nge-uxhumano lobuchopho lwe-intanethi
Kufanele ufunde lokhu ngokuthula kukhona isifundo sangempela empilweni »
Ukuvakashelwa okuphelele: 9.387.146
keazer op I-Duncan ayikwazi ukucula futhi i-Eurovision Song Contest iphumelele (i-LGBTI propaganda)
mb. op I-Duncan ayikwazi ukucula futhi i-Eurovision Song Contest iphumelele (i-LGBTI propaganda)